Sasanangy samihafa ve ? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nalaza ny fetin’ny vehivavy 8 marsa. Zary lasa fety mihitsy aza ity andro ity. Fetin’ny vehivavy ! Fety fankalazana ny zon’ny vehivavy. Tena mahazo vahana eran-tany raha samy fanajana zon’olombelona. Zon’ny vehivavy manoloana ny tsy fitoviana amin’ny lehilahy na ilay lazaina hoe, miralenta. Tato ho ato dia teraka koa ny endrika vaovao atao hoe « genre », na ny maha lahy sy ny maha vavy, lafiny fitoviana araka ny fitaovam-pananahana. Noho izy ankalazaina sy zary fety iombonana ve dia midika fa efa mivoatra tokoa ny fanajana ny zon’ny vehivavy eto amintsika? Rehefa ankalazaina ve dia manjary voahaja ny lalàna ? Sao lasa zara mitanila ny fanajana ny zon’olombelona eto amintsika ?
Ankilany manko, mitaraina ireo mpanohitra fa mizotra mankamin’ny didy jadona ny fanjakana malagasy tato ho ato. Betsaka ny zo voahosihosy na ny fahalalahana, na ny fanehoan-kevitra. Be ny fandikan-dalàna miseho lany. Raha zohina manko, lazaina amin’ny fomba hafa : ny lalàna dia miorina amin’ny fanambarana ny zon’olombelona. Ny filoham-pirenena dia « mianiana eo anatrehan’Andriamanitra sy ny firenena ary ny vahoaka …Mianiana fa hanokana ny heriny manontolo hiarovana sy hanamafy ny firaisam-pirenena sy ny zon’olombelona…Hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny lalàm-panorenena, hikatsaka hatrany ny soatoavina ho an’ny vahoaka malagasy tsy an-kanavaka. »
Ampahan’olona ny vehivavy tandrovin-jo ; ampahan’olona ireo nifidy ny mpitondra ; ampahan’olona ireo mpiandany ; ampahan’olona ny antoko ; ampahan’olona ny mpanohitra… Ny fianianana anefa dia ho an’ny vahoaka malagasy tsy an-kanavaka sy toky hanamafisana ny firaisam-pirenena.
Raha mbola misy lalàna tsy voahaja, raha misy olona any am-ponja noho ny fanehoan-keviny, raha misy olona enjehina noho ny safidy politika, raha mbola misy olona iharan’ny antsojay amin’ny fampiharana lalàna … Dia voahelingelina ny firaisam-pirenena ary voahosihosy ny zon’olombelona.
Tena miahy ny vahoaka tsy an-kanavaka ve ny fanjakana ? Tena miaro ny mpiray tanindrazana ve ny fitondrana ? Tena manamafy ny firaisam-pirenena ve ny politika ampiharina ? Raha tsia no valin’ireny fanontaniana ireny dia mbola hifandaka ary ho sasanangy samihafa ny velirano sy ny fianianana. Natao hitsinjovana ny vahoaka tsy an-kanavaka ny velirano ary ny fianianana no miantoka ny maha marim-pototra azy satria mitandro ny zon’olombelona sy ny lalàm-panorenena. Koa ny fiverenana amin’ny fanajana ny lalàm-panorenana no ahafahan’ny mpitondra mitsara tena. Ny lalàna dia natao hitsarana, izany hoe « handanjalanjana ny rariny sy ny hitsiny ». Mahay mitsara tena mba hitondra tena araka ny mety sy sahaza ny mahaolona, takian’ny zo fototra sy ny lalàna natao hampijoro ny rariny sy ny hitsiny eo amin’ny fiarahamonina.
Koa tsy misy rariny sy hitsiny monina amin’ny tany raha tsy mahay mitsara tena ny mpitondra. Marefo ny firaisam-pirenena raha hadinoina ireo fianianana nanjary velirano. Fa vao mainka mafy sy matanjaka izany rehefa eo ny tahotra an’Andriamanitra. Io no nanaovana ny fianianana fahiny. Enga anie hampahatsiahy ny lehilahy amin’ny teny nomeny ny fankalazana ny andron’ny vehivavy 8 marsa.